Caro ka dhalatay rakaab xoog looga dajiyay diyaarad - BBC News Somali
Rakaabka oo xoog looga saarayo diyaaradda. Xigasho: Audra D. Bridges
Jayse D Anspach oo daabacay muuqaalkan ayaa yiri ' Shirikada United Airline ayaa rakaab dheeri ah tikidho u gooysay, ka dibna waxay damceen inay dajiyaan afar qof oo ay rabeen inay ku badalaan shaqaalaha diyaaradda '
Jayse hadalka ayuu sii watay oo wuxuu yiri ' Rakaabku way diideen inay dagaan, ka dibna shaqaalaha diyaarada ayaa doortay nin muuqaal ahaan ka soo jeedo Aaasiya ah iyo xaaskiisa in si qasab ah lagu dajiyo'.
''Dhaqtarka ayaa sheegay inuu shaqo isbitaalka ah uu ka daahayo, wuuna diiday inuu dego'' intaas ayuu raaciyay ninkan rakaabka ah ee warkan qoray.
Tobon daqiiqo ka dib dhaqtarkii oo dhiig ka da'ayo ayaa dib ugu laabtay diyaaradii.
Xigashada Sawirka, Jayse D Anspach
Ninka wali lama shaacinin aqoonsigiisa balse rakaabka kale ayuu u sheegay inuu yahay dhakhtar
Waaxada waxa ay sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonto dhacdadani, oo ay sheegtay ''inaysan waafaqsanyn xeerarka ay ku howlgasho waaxda''.
Xigashada Sawirka, Tyler Bridges/Twitter
Kooxda Daalibaan oo sameysay dhacdo dad badan ay ka argagaxeen